Fanolorana ny fiara vaovao - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
“Ho feno rameva tanora ny tanànao…” Faminaniana efa ela no nomena ny fiangonana izany, hoy ny ray aman-dreny pasitera Mailhol ny sabata 25 novambra 2012 lasa teo, tetsy amin’ny Fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy. Io fotoana io no nanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fiara vaovao ho an’ny fiangonana.
Ny perikopa tamin’io sabata io dia nalaina tao amin’ny Salamo 119: 33-40; Lioka 7: 36- 50 ary Hebreo 6: 4- 12, saingy nisongadina tao anatin’ny toriteny kosa ny amin’ny finoana, izay nalaina tao amin’ny Hebreo 11: 1. “fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” ny finoana hoy ny pasitera Mailhol. Nampahatsiahiviny tamin’io fotoana io ny faminaniana nomena ho an’ny fiangonana tany ampiandohana, izay nambarany fa sarotra ny nino azy tany aloha. Maizina izao tontolo izao, hoy izy, ary sahirana ny olona, saingy eo amin’ny fiangonana Apokalypsy kosa no iposahan’ny mazava, ary efa lehibe izany fahazavana izany ankehitriny. Tao aorian’ny toriteny dia notohizana tamin’ny fanolorana ny fiara tamin’ny fomba ofisialy ny fotoana. Fiara Toyota Sequoia V8 izy ity ka ny ray aman-dreny pasitera Mailhol, sy ny sekretera jeneraly nasionaly (loholona James Chapard RAVELONANTENAINA) no nanolotra azy.
Tamin’ny tapany hariva dia mbola nitondra fampaherezana ho an’ny fiangonana hatrany ny ray aman-dreny pasitera Mailhol, fampaherezana izay nalaina tao amin’ny Lioka 7: 36-50. Ny marainan’ny Alahady 25 Novambra kosa dia efa nanainga ho any Mandritsara indray i pasitera Mailhol sy ireo mpiara-dia aminy. Marihina fa hisy ny famaranana ny fampianarana ny boky Apokalypsy ao an-toerana izay ialohavana kaofearansa lehibe hatrany. Raha tsiahivina kely dia tany Toamasina no nanatontosana izay famaranana izay ny sabata 10 Novambra 2012, ka 220 mianadahy no vita batisa tamin’izay.